अब हामी त्यता वरपर गस्ती गर्छौं । ढुंगाहरूमा लठ्ठीले हानेर आवाजहरू निकाल्छौँ, सुसेल्छौँ । खोक्छौँ, हाच्छ्युँ गर्छौं अनि मात्रै सुत्छौँ ।
हामीले पूरा नहुने आशा गरेर आफ्नो स्वास्थ्य बिगार्नुभन्दा पूरा हुने सम्भावना भएका अपेक्षा गर्दा अर्को वर्ष सरकार पनि फेल हुनेछैन, हामी पनि फेल हुनेछैनौँ ।
यो समय त नाकमा मास्क, आँखामा कालो चस्मा र कानमा ठेडी लगाएर चुपचाप घरमा बस्‍ने समय हो ।
एकछिन सरकारलाई गाली गर्नुपर्‍यो
सरकारले जनतालाई क्‍वारेन्टाइनमा राख्‍न सक्दैन, जनताले सेल्फक्वारेन्टाइनमा बस्‍नु पर्छ । कोरोना लागेपछि मात्रै सरकारले हेर्छ । यस्ता गैरजिम्मेवार व्यक्ति त स्वास्थ्यमन्त्री छन् । कोरोना लागेपछि त डाक्टरले हेरिहाल्छ नि, सरकारले हेर्नुपर्छ र !
अहिले संसद्‍मा भाषण ठोक्‍ने नेताहरुको कुरा सुन्‍नुस्, त्यो कुनै गँजडीको गफभन्दा फरक लाग्दैन ।
नछोड वामदेव नछोड !
यस्तो स्पष्ट बहुमत ल्याएका बेला पनि ठेलठाल गरेर प्रधानमन्त्री नभए कहिले हुने ?
कमरेड जाने कार्यक्रममा जुत्ता निषेध गरौँ !
अब आइन्दा कमरेड जुन कार्यक्रममा जान्छन्, त्यो कार्यक्रममा जुत्ता निषेध गर्नुपर्छ ।
अलिकता हतार गरेकाले कुरा बिग्रेको हो किनभने पैसा भनेको त मेसिन ल्याएपछि छाप्‍ने हो । तर उनले मेसिन ल्याउनुअघि नै पैसा छाप्‍न सुरु गरे ।
नेता अर्कैका राम्रा !
पराई देशका नेताहरूले कुनै काम गर्दा हामीलाई मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्न मन लाग्छ । त्यस्तै काम आफ्ना नेताले गर्दा उन्मुक्त कण्ठले गाली गर्न मन लाग्छ । किन ?
एमसीसीमार्फत नेपाललाई जुन अनुदान आउनेवाला हो, त्यो नेपालले सहजपूर्वक ग्रहण गरेर अमेरिकालाई सहयोग गर्नुपर्ने भएको छ । के गर्ने, कहिलेकाहीँ अनुदान दिएर होइन, लिएर पनि सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउँदो रहेछ ।
पार्टीभित्र अब गुटबाजी गर्न पाइँदैन भन्‍ने निर्णय जो छ, त्यो सबै गुट मिलेर गरेको सामूहिक निर्णय हो । सबै गुटको सामूहिक निर्णय भएकाले अब गुटबाजी हुँदैन भन्‍नेमा पूरै विश्‍वास गर्न सकिन्छ ।
सरकारको अधिनायकवाद त फैलिादै गएर अहिले देउवासम्मै पुगिसकेको रहेछ । सरकारले ल्याएको एजेन्डा देउवासम्मले त बोक्न बाध्य छन् भने योभन्दा ठूलो अधिनायकवाद अरु के होला र ?
सुकोमल शरीर, स्वादिष्ट खानपान, सुविधासम्पन्न महल वा आश्रमको बास, आरामदायी गाडी, जहाज वा हेलिकप्टरको सवारी, बिरामी हुँदा वा भएजस्तो गर्नुपर्दा पाँचतारे अस्पतालको सुविधा, यस्ता सबै सुख दुवैथरीलाई प्राप्त छ ।
माओवादी नेताहरु अहिले एकपछि अर्को दौरा–सुरुवालीकृत हुँदै गइरहेको देख्दा सर्वसाधारण भने चकित छन् ।
साताको दुई पटक डायलासिस गर्नुपरे पनि देश र जनताको सेवा उनले गरिरहेका छन् । यो सानो देशप्रेम होइन । हाम्रो देश सानो भए पनि यसप्रतिको प्रेम भने ठूलो छ ।
ढिकाबाट टुक्रा–टुक्रा हुनु नै कम्युनिस्ट पार्टीको मौलिक विशेषता हो । जो पार्टी टुक्रा हुँदैन, त्यो कम्युनिस्ट पार्टी नै हुन सक्दैन ।